स्वस्थ जीवनका लागि हप्तामा कतिपटक सेक्स गर्ने ? « Mero LifeStyle
यौनसम्पर्क गर्नुको अनेकौं फाइदा छन् । नियमित सेक्स गर्नाले विभिन्न रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ । अध्ययनका अनुसार नियमित यौन सम्पर्कले स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्छ । साथै, मुटु बलियो हुने र तनावको खतरालाई पनि कम गर्छ । आरकाइभ्स अफ सेक्शुअल बिहेवियरमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार पछिल्लो दशकको तुलनामा अमेरिकाका मानिसमा सेक्सप्रतिको लगाव कम भएको छ ।
सन् २०१० देखि २०१४ सम्ममा अमेरिकाका मानिसले सन् २००० भन्दा २००४ को तुलनामा ९ गुणा कम सेक्स गरेका छन् । सेक्समा कमी विवाहितहरुमा धेरै भएको पाइयो, जो सँगै हुन्थे । तिनीहरुमा प्रत्येक वर्ष १६ पटकसम्म यौनसम्पर्क कम हुँदै गयो ।
कामलाई धेरै समय दिने र नियमित उत्तरदायित्वलाई सम्हाल्नु यसको मुख्य कारण भएको देखियो । साथै इन्टरनेटमा भएका मनोरञ्जनका साधनहरुका कारण पनि खालि समय नहुनाले कमी आएको भेटियो । यो तथ्यको मतलव यो पक्कै पनि होइन कि हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौं जहाँ यौन सम्पर्क हुँदैन ।
किनकी औसत एक व्यक्तिले वर्षमा ५४ पटकसम्म यौन सम्पर्कको आनन्द लिन्छन् । यसको मतलव हो कि हप्तामा एकपटक भन्दा केही बढी । त्यहि एक साथ रहने विवाहित जोडी सालमा ५१ पटकसम्म यौनसम्पर्क गर्छन् ।
सेक्स कति पटक गरिदैँछ । यसले त्यो बेलासम्म फरक पर्दैन जबसम्म तपाई र तपाईको पार्टनर यसले सन्तुष्ट हुन्छन् । अध्ययनकर्ताका अनुसार हप्तामा एक पटक यौनसम्पर्क गरेर पनि खुशी रहन सकिन्छ ।
हप्तामा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्नाले सम्बन्धमा सन्तुष्टि र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले ठीक मानिन्छ ? हप्तामा एकपटक भन्दा धेरै सेक्स गर्नाले त्यति धेरै खुशी नमिल्न नि सक्छ जति एकपटकको यौन सम्पर्कले दिन्छ । यदि तपाईँ धेरैपटक यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेशनेसका लागि तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहनुपर्छ ।